Dia mankany Machu Picchu | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | mpitarika, Peru
Iray amin'ireo toerana majika indrindra eto an-tany, izay misy ifandraisany amin'ny maso mitanjaka ny fifandraisana misy eo amintsika sy ny tontolo iainana. Machu Pichu. Tranonkala mahafinaritra tokoa! Ny backpacker manaja tena dia tokony hianika tendrombohitra mankany Machu Pichu, fa ny mandeha sy mitondra kitapom-batsy dia tsy safidy tokana.
Androany no tanjontsika dia any Amerika atsimo, eo an-tampon'ny Peru, hitsidika an'i Machu Pichu, iray amin'ireo Fahagagana fito eto amin'izao tontolo izao.
2 Mandehana mankany Machu Picchu
Ireo rava Maherin'ny 2400 metatra ny haavony. Misy ve any amin'ny faritra Cusco, 80 kilometatra miala ny tanànan'ny anarany mitovy. Ny antontan-taratasy taloha sasany dia nilaza fa ilay be pitsiny dia mety ho toeram-ponenana Inca tamin'ny taonjato faha-XV, saingy ny famakafakana ireo fananganana fombafomba ankehitriny ny hevitra izay mitondra dia ny taloha notokanana ho fitoerana masina ara-pivavahana.
Na inona na inona, Machu Picchu, tendrombohitra taloha any Quechua dia a talanjona tamin'ny injeniera sy ny maritrano taloha. Eo anelanelan'ny tendrombohitra roa no misy azy, Machu Picchu sy Huayna Picchu, ary ilay faritra naorina dia ahitana trano efa ho 200 izay nanomboka naverina tamin'ny taona 70.
Mafana sy mando ny andro amin'ny antoandro ary mangatsiaka amin'ny alina. Dia a faritra orana, indrindra eo anelanelan'ny Novambra sy Martsa, maro amin'ireo mpizahatany tonga amin'ny fahavaratra avy any amin'ny hemisphere atsimo no miaina orana tsy tapaka.
Mandehana mankany Machu Picchu
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia manomana, mandrindra ary mamandrika tapakila fidirana amin'ny tranokala, zavatra iray izay nahasambatra fa afaka vita am-bolana maro talohan'izay. Noho izany, miaraka amin'ny daty iray dia tsy maintsy midina miasa ianao.
Ny teboka fanombohana amin'ny lalana mankany Machu Picchu dia ny Tanàna Cusco. Amin'ny tenany ihany dia mendrika fitsidihana ny tanàna satria Io no renivohitry ny fanjakana Inca ary tanàna iray tena lehibe amin'ny fotoanan'ny praiminisitra. Izany dia Tsangambaton'ny hystorika nasionaly y Lova eran-tany. Misy fiangonana hitsidika azy, ao ny Plaza de Armas, fivoriambe ary ny sisa tavela amin'ny tanànan'ny tanàna Inca izay tsy vitan'ny fandresena, soa ihany, mba hamafana.
Raha izao no zava-tsoa hitanao dia misy zavatra miara-miasa amin'i Machu Picchu: ny Inca Trail. Ity lalana ity dia manomboka amin'ny kilometatra 82 amin'ireo lalana izay miainga avy any Cusco mankany Machu Picchu. Tsy natao ho an'ny rehetra izany satria tsy maintsy mandeha efatra andro sy telo alina ianao, matetika orana sy mangatsiaka, fa mendrika izany. Miavaka ny mandeha amin'ny làlana feno zato, manan-danja tokoa.
Raha tsy te-handeha loatra ianao misy lalana fohy kokoa izay maharitra roa andro sy iray alina. mazava ho azy, tsy misy amin'ireo làlana ireo no atao irery. Ny fitsangantsanganana amin'ny Inca Trail dia ao anaty vondrona misy olona mihoatra ny 10 ary miaraka amin'ny fisian'ny mpitari-dalana foana.
Raha tsy ny toetranao ny anao dia avy eo afaka mandeha any ianao amin'ny lamasinina. Ny tapakilan'ny lamasinina dia azo vidiana mialoha ihany koa, iray volana mialoha. Miala amin'ny gara antsoina hoe Poroy izay 20 minitra miala ny tanànan'i Cusco ny lamasinina, na dia misy aza ny serivisy sasany miainga avy any Ollantaytambo. Ny fitsidihana dia adiny efatra ary miafara amin'ny Aguas Calientes na ny tanànan'i Machu Picchu.
Avy amin'ny iray amin'ireo tanàna roa ireo no misy safidio ny fiakarana mankamin'ny trano mimanda: afaka miakatra ianao fiara fitateram-bahoaka, ao anatin'ny 20 minitra fotsiny, na azonao atao miakara an-tongotra an-tongotra adiny iray sy sasany ary tsy mandoa peso. Raha fintinina, hatreto, ny ilainao dia ny miantoka ny tapakilan'ny lamasinina mankany Aguas Calientes / Machu Picchu sy ny tapakila fidirana mankamin'ny trano mimanda (ary, raha miakatra amin'ny bus ianao, ny bus koa).
Ny fidirana mankamin'ny rava dia manomboka amin'ny 6 maraina Saingy tokony ho hitanao ny zavatra tianao hovangiana ho fanampin'izany: azonao atao ny manambatra an'i Machu Picchu sy Huayna Picchu, na amin'ny tendrombohitra na amin'ny tranombakoka. Olona vitsivitsy ihany no mahazo miditra isan'andro, noho izany dia zava-dehibe ny mividy azy ireo mialoha handaminana ny tohin'ny dia amin'io daty io. Indraindray ny masoivohon'ny fizahan-tany dia manamora ny fizotrany ity dingana ity fa raha tsy izany dia azonao atao ny mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny tranokala foana www.machupicchu.gob.pe.
Tokony ho fantatrao koa izany tsy mahazo miditra amin'ny sakafo ianao, que ny trano fidiovana dia ivelan'ny sarotra ary rehefa tafiditra ao anatiny ianao dia tsy afaka miakatra na mianika amin'ny tranobe na mifoka. Eto dia tsy azonao adinoina ny Tempolin'ny Condor, ny Tempolin'ny Fikandrana Telo, ny Tempolin'ny Masoandro malaza ... mahafinaritra daholo ny zava-drehetra.
Ankehitriny, fahotana ny fahatongavana eto ary tsy fanararaotana ny tontolo iainana ka amiko tsy azonao hadinoina ilay fitsidihana an'i Huayna PicchuEny, mahafinaritra ny fiakarana. Izy io koa dia manana tranobe, lampihazo izay midina ao amin'ny banga, tionelina, vato voasokitra, sisa tavela amin'ny tranobe mihantona, ny seza Inca ary ny fahitana an'i Machu Picchu ary ny tontolo mahafinaritra ...
Huayna Picchu dia tsy azo tsidihina afa-tsy amin'ny fiovana roa, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 maraina ary manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana. Aorian'izay dia tsy mahazo miditra intsony ny olona satria endrika zavona ary mandeha an-tongotra sy mananika no mampidi-doza. Noho izany, eny na eny raha tsy te-hiala amin'ity tendrombohitra ity ianao, dia tsy maintsy ampidirinao izany rehefa mitazona tapakila ianao. Safidy iray hafa hitsidihana ny miakatra ny Putucusi raha te hanana fomba fijery hafa momba an'i Machu Picchu na koa, anao manokana Tendrombohitra Machu Picchu, izay eo anoloan'ny Huayna Picchu.
Ny tendrombohitra Machu Picchu dia manana 3.061 metatra ny haavony ary ny làlana dia manomboka amin'ny trano mimanda ihany. Manaraka ny Boriboritany 1 ianao ary tonga eo amin'ny toerana fisavana. Mila miakatra be ianao, saingy tsy sarotra izany satria tsy dia mideza ary malalaka. Manisa kajy an-tongotra roa kilometatra ary mihoatra ny telo ora.
Rehefa miakatra ianao dia ho hitanao ny fijanonan'i Huayna Picchu sy ny trano mimanda amin'ny toerana ambany kokoa ary hahita orkide tsara tarehy ianao. Ary farany, avy any ambony dia manana fomba fijery mahafinaritra momba ny trano mimanda sy ny ony Vilcanota ianao. Ka raha misy antony tsy ahafahanao miakatra any Huayna Picchu dia tsy azonao ny tapakila, ohatra, safidy tsara io izay tsy handiso fanantenana anao.
Fampahalalana azo antoka momba an'i Machu Picchu:
Olona 400 monja no avela isan'andro mizara vondrona roa misy 200.
famandrihana iray volana farafahakeliny.
Ny tapakila fidirana mankany an-tendrombohitra dia mamela ny fitsidihana ny trano mimanda ao amin'ny boriboritany telo sy ny fidirana amin'ny làlana hafa an'ny tendrombohitra Machu Picchu.
Tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny antontan-taratasinao sy ny tapakilanao ianao ary rehefa mamaky ny fanaraha-maso fidirana ianao dia asio tombo-kase ny anaranao feno ao amin'ny fisoratana anarana, na eo amin'ny fidirana na eo amin'ny fivoahana.
Kajy fa ny ora ipetrahanao raha manao ny iray amin'ireo boribory telo ianao ary manampy lalana hafa mankany dia adiny enina.
mahazo mampiasa ny trano fidiovana indray mandeha ianao.
Aza mitondra mihoatra ny kitapom-batsy kely, ampiasao fanafody, solomaso ary solomasoandro.
tsidiho ny tranombakoka miaraka amin'ireo sanganasa arkeolojika, zaridaina botanika ary fampiratiana multimedia.
mankafy ny loharano mafana an'i Aguas Calientes
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Dia mankany Machu Picchu
Jereo izay ho hitanao ao Aqaba, Jordania